Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada(Bogga 4)
Maxay u kala duwanyihiin inta udhaxeysa $ 30 iyo $ 300 qasabada biyaha?
2020 / 10 / 21 10687
Soo bandhigida farqiga u dhexeeya $ 30 iyo $ 3,00 qasabadaha Kala soocida walxaha qasabada: Qalabka faamka ee caadiga ah ee suuqa yaala maanta waa: birta birta ah, dhammaan-balastikada, naxaasta, tuubada daloolka zinc ...
2020 / 10 / 21 10259
Ma go’aansatay inaad dib u habayn ku samayso jikadaada? Xitaa haddii aad kaliya siinaysid aagga jikada qolka jikada wax cusbooneysiin ah, bedelida qasabadda jikada waa casriyayn oo si fudud lagu fulin karo. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ...
2020 / 10 / 20 11478
Qoysas badan si ay khariidada ugu fududaan u yeelaan, ayaa loo rakibi doonaa si loo hagaajiyo tuubada biyaha, laakiin gabi ahaanba ma ahan mid caan ah. Haddaba sidee ku saabsan qasabadda biyaha kulul ee degdegga ah? Sida loo iibsado wat kulul kulul ...
Miyaad ku dhiiran kartaa inaad ku iibsato qasabad saxanka musqusha wax ka yar $ 20?
2020 / 10 / 20 9544
Tuunbooyinka qasabadaha dhammaantood waxay u egyihiin si isku mid ah, laakiin farqiga ayaa weyn! Qiimo aad u jaban ayaa qasab ah! Weli miyaad ku dhiirrataa inaad iibsato? Qalabka tuubada ayaa sida caadiga ah ka hooseeya $ 20 Zinc alloy oo u eg naxaas a ...
Habab fudud oo Dayactir loogu sameeyo tuubada daadata ee 5 Tallaabo oo Fudud
2020 / 10 / 12 10328
Hababka fudud ee lagu Dayactiro Qasacadaha Leaky ee 5 Tallaabooyin Fudud Philipp Mauerhofer / EyeEmGetty Pictures Inuu yahay iyo in kale sabab u tahay biyo isku urursiga hoostiisa, ama dhibka dhibku ka jiro ...
Madaxyada qubeyska ugu fiican 2020
2020 / 10 / 10 11535
Madaxa ugu fiican ee maydhashada 2020 Madax qubays aad u fiican ayaa samayn kara kala sooc weyn marka laga hadlayo bilawga maalintaada cagta saxda ah. Mar waxaan dareemayaa culays ku dhex jira mornin-ka ...
Nidaamyada Tuubbooyinka Qubeyska Roob-biyoodka Ugu Fiican
2020 / 10 / 09 13256
Ma jiraan wax ka nasasho badan qubeyska nasashada? Dabcan, haddii nidaamka tubbada qubeyskaagu uusan si wanaagsan u qabanayn shaqadiisa, ma heli doontid wixii aad ku baayacday. Qofna ma doonayo inuu si joogto ah u halgamo ...
2020 / 10 / 09 10667
Nidaamka otomaatiga aqoonta ee Manta ayaa hadda xidhay $ 13 milyan oo silsilad ah A1 oo madax u ah Bessemer Enterprise Sahabo. Manta ayaa sheegaysa inay dhaqaalaha u marsiineyso hormarinta shaqada ...
2020 / 10 / 08 9741
Lacagta qolka nasashada waxay dooran kartaa nooca tuubada ee Pricey Ed: Waxaan ku shaqeynayaa lambarada qashin-qubka cusub waxaanan u kuurgalay inaan kala dooran karo inta u dhexeysa laba farood ee “baahsan” ama “faleebada”. Ma ...
Is-waafajinta jilicsan ayaa u timid Nolosha Kintsu (TM) Tubbada kala-soocidda ee Brizo
2020 / 10 / 08 9833
INDIANAPOLIS, Oktoobar 5, 2020 / PRNewswire / - Kintsu ™ Tub Assortment ee Brizo® wuxuu isku dheelitirnaanta fudeyd la yeelanayaa isqilaafka, joogteynta xulashada, iyo diidmada sinnaanta. Laga soo jiiday ...
Si loogu rakibo tubbada darbiga-darbiga jikada waxay u baahan tahay in fiiro gaar ah la yeesho
2020 / 10 / 08 8589
Marka hore, talaabooyinka rakibaadda: 1. Kahor rakibida, marka hore fur ilaha biyaha, ka saar wixii nijaasta ah ee ku jira, quruurux iyo waxyaabo kale oo wasakh ah gudaha tuubbada, ka dibna iska jooji biyaha dhanaan ...
Ma qasabadaha Hal-qabsi Keli ah ayaa Ka Fiican?
2020 / 10 / 08 9585
Xulashada qasabadaha jikada waxay u noqon doontaa si aan caadi ahayn toosan, hase yeeshe guud ahaan waxay kugu la wareegi kartaa haddii ay dhacdo xulasho aan habboonayn. Xulistaada qasabadaha intaa dheer st ...